News Code : 660213
ရန်သူကိုတိုက်နိုင်ရန် အကူအညီပေးခြင်း ...
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ တစ်ဦးတစ်ယောက် မှ အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) ၏ ရှေ့ တော်မှောက်တွင်လာရောက် ရပ်လေ၏။ အေမာမ်(အ.စ) အားလျှောက်ထားလေ၏ ။အို အမီးရ် ရွလ်မို မေနီး ၏ သားတော် ကိုယ်တော်အား နေအ်မသ် တော်အားလုံးချီးမြှင့် ပေးသနားတော်မူထားသည့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်ကို ဝါစတာ ပြုပြီး မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ်ပါတယ် .....
ထိုနေအ်မသ်တော်များ အတွက် ကိုယ်တော်အနေဖြင့် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်သခင်ထံဝယ် တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အသနားခံမှုကို ရယူခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဆွတ်ခူးထားပါတယ် ... တစ်နည်းအားဖြင့် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ကိုယ်တော်တိုင်မှ ချီးမြှင့် ပေးသနား တော်မူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ....
အနည်းငယ်(ကျေးဇူးပြုပြီး) ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်ရန်သူအကြား တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းပေးပါ ခင်ဗျား ... ဒီရန်သူဟာ မည်သည့် အသက်ကြီး ရွယ်အို ကိုမျှ အလေးမထား ဂရုမစိုက်သလို မည်သည့် ကလေးကိုမျှလည်းမသနား မကြင်တတ်တဲ့ ဆွာလင်မ် ပါ .....
အေမာမ်ဟစန် (အ.စ) ခေါင်းအုန်းကိုမှီပြီးအနားယူနေရာမှ... ဤစကားကို ကြားပြီး ထထိုင်တော် မူလေ၏။ထိုနောက်မိန့်တော်မူလေသည်။အသင်ရဲ့ ရန်သူဘယ်သူလဲ ...? သူကို အသင် အတွက် ဖြေရှင်း ရအောင် ….?
၎င်းမှာ ဖြေလေ၏ ။ ဆင်းရဲ နွမ်းပါး ၊ချိုတဲ့ မှုပါ …. ခင်ဗျား …
ဤစကားကို နားထောင်ပြီး အေမာမ်ဟစန် (အ.စ) သည် ခေါင်းတော်ကို အောက်သို့ ဆိုက်ထားတေယ်မူ ပြီး အချိန် အနည်းငယ် တိတ်ဆိတ်နေတော်မူလေ၏။ ပြီးနောက် ဦးခေါင်းတော် ကိုထောင်တော်မူပြီး မိမိ၏ အကျိုးတော်ဆောင်(ခါသေမ်)ကို မိန့်လေ၏။ အသင်ဆီမှာ ငွေ အသပြာ ရှိသလောက် ယူလာခဲ့ပါ ….. အကျိုးတော်ဆောင်မှ ဒေရ်ဟမ် ၅၀၀၀ ယူလာပြီး ကိုယ်တော်(အ.စ) ၏ ရှေ့ တော် မှောက် တွင် ထား လေ၏။ အေမာမ်(အ.စ) မှ ၎င်းကိုပေးဖို့မိန့်လေ၏။ ပြီးနောက် ၎င်းကို မိန့်တော် မူလေ၏ ။အသင်ကျွန်ုပ်ကိုပေးသည့် ကစမ်များကို ဝစတာ ပေးပြီးပြောပါရစေ …အသင်အတွက် ဒီရန်သူ (ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ၊ချို့ တဲ့မှု ) ဘယ် အချိန်ဘဲ လာပြီး ရက်စက် ရက်စက် ၊ဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်ုပ်ထံ ချက်ချင်း ထလာပါလေ …..
ကျမ်းကိုး - ဗေဟာရွလ်အနဝါရ် အတွဲ ၁၀ စာမျက်နှာ ၂၀၇
အရှင် ဧည့်သည် အရှင်၏ တံခါး ပေါက်မှာ ရောက်နေပါတယ် …
အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) မစ်ဂျစ်ဒ် အတွင်းဝင်ရောက်သည့် အခါတိုင်း မိမိဦးခေါင်း တော်ကို အပေါ်သို့ မော့ တော်မူပြီးမိန့်လေ၏။ အိုမွေးမြူ ၊ဖန်းဆင်း စောင့်ရှောက် တော် မူသည့် အရှင်သခင် အရှင် ဧည့်သည် အရှင်၏ တံခါး ပေါက်မှာ ရောက်နေပါတယ် … အို ကျေးဇူးပြုအကျိုးပြုတော်မူသည့် အရှင် အသင်ထံတော်ဝယ် ဂိုနာဂါ (အပြစ်ရှိသူ) တစ်ယောက် ရပ်နေပါတယ် ….အို ကရီးမ် ဖြစ်တော်မူသည့် အရှင် မိမိ၏ ဂရုဏာတော် ဖြင့် ကျွန်တော်၏ မကောင်းမှု (အပြစ်များ) ကို ဖယ်ရှား ပေးသနား တော်မူ ပါ။
ကျမ်းကိုး - ဗေဟာရွလ်အနဝါရ် အတွဲ ၁၀ စာမျက်နှာ ၁၉၀
မှတ်ချက် - အေမာမ် ဟစန် (အ.စ) သည် မအ်စူးမ် အပြစ်မဲ့အေမာမ် ဖြစ်တော်မူပြီး ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ နောက်လိုက် နောက်သားများကို ပညာပေးသင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မိမိနေထိုင်ရာ ဒေသ၊ရပ်ကွက် ၊ မြို့ တွင် မစ်ဂျစ်ဒ် ရှိနေလျှင် အေမာမ် ဟစန်(အ.စ) သခင်၏ စွန္နသ်တော် ကို လက်တွေ့ ကျင့်သုံးသင့် ပါတယ် ….
June 5, 2019 - 5:53 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချက်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ချက်ဝန်ကြီးချုပ်တို့က ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးနေစဉ် (MARTIN DIVISEK/EPA)
June 4, 2019 - 5:57 PM
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ တော်တွင် ကမ္ဘာ ကွတ်ဒ်စ်နေ့ ချီတက်ပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photo
June 4, 2019 - 5:46 PM
အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ)၏ သုံးဆယ်နှစ်ပတ်လည် ဝမ်းနည်းခြင်း အခမ်းအနား အစ်ဖဟန်းမြို့ ။ ။ Photo
June 4, 2019 - 5:33 PM
မြန်မာနှင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်ဆွေးနွေး
June 4, 2019 - 5:17 PM
ကဲရ်ဘလာမြို့ တွင် မဂ်ျမာယေ ဂျဟန်းနီ အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)မှ ကွတ်ဒ်စ်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ် ။ ။ Photo
June 3, 2019 - 8:30 PM
အေအေရခိုင်မှာ အခြေစိုက်ခြင်း လက်မခံဟု တပ်မတော်ပြောကြားချက် ခိုင်သူခ တုံ့ပြန်
June 3, 2019 - 8:18 PM
ရမ်သွာန်လမြတ် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း တတိယလ ဂျမ်ကရန်း မက်စ်ဂျဒ် အခမ်းအနား ။ ။ Photo
တပ်မတော်နှင့် AA ငါးလခန့်အတွင်း ထိတွေ့မှု ၂၀၆ ကြိမ် ဖြစ်ပွား ပြည်သူ ၂၀ ဦး သေဆုံး၊ ၄၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
June 3, 2019 - 7:45 PM
လမြတ်ရမ်သွာန် အချိန်အခါဝယ် အေမာမ်အလီ(အ.စ) ၏ရောင်ဇာတော်မြင်ကွင်း။ ။ Photo
အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ)၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ဇေယာရတ်လာ ဝါဖြေသူများအတွက် ဝါဖြေအစားအစာများကို အဆင်သင့်ပြင်ဆင် ထုတ်ပိုးနေပုံ တီဟီရန်။ ။ Ph
June 2, 2019 - 8:58 PM
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု ပိုတိုးလာ၊ မူယစ်ဆေးဝါးမှု အများဆုံးဖြစ်
June 2, 2019 - 8:46 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချက်နှင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့ကို သွားရောက်
June 2, 2019 - 8:28 PM
အင်းဒင်ရွာလူသတ်မှုကျူးလွန်သူများ သမ္မတလွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခြင်းမဟုတ်
June 1, 2019 - 11:45 PM